पारसको १२ लाख खाएको बारे बोलिन सोनिकाकि आमा :सोनिका भन्छिन्, कन्ट्रोभर्सी मलाई खोज्दै आउँछ, म विवादित हुन चाहन्न तर विवाद मलाई खोज्दै आउँछ !!! – News Nepali Dainik
पारसको १२ लाख खाएको बारे बोलिन सोनिकाकि आमा :सोनिका भन्छिन्, कन्ट्रोभर्सी मलाई खोज्दै आउँछ, म विवादित हुन चाहन्न तर विवाद मलाई खोज्दै आउँछ !!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ११, २०७७ समय: १८:१९:४८
युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकाय अहिले आफ्नै दुनियामा ब्यस्त छन् । उनले दिने अभिब्यक्ति भने कहिले काँही विवादित हुन्छ । पूर्वयुवराज पारस शाहसंगको सम्बन्धका कारण पनि उनी विवादित थिइन् । तर अहिले उनीहरु अलग भइसकेका छन् । कोरोना जोखिमका कारण उनी लामो समय बझागं स्थित आफ्नो घरमा गएर बसेकी थिइन् ।
Last Updated on: February 23rd, 2021 at 6:20 pm